Mpinamana Fotsiny sa Mpifankatia? Fizarana 2 | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Romanina) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Turkmène Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa
Isaky ny mila olona hiresahana ny namanao, dia vonona foana ianao ny hihaino azy sy hiresaka aminy. Lasa nifampiresaka be àry ianao sy ilay namanao, tato ho ato. Mety hiteraka olana anefa ilay izy, raha ankizilahy izy nefa ianao ankizivavy, na ny mifamadika amin’izany. Hoy angamba ianao: ‘Mpinamana fotsiny ange izahay e!’ Ary ianao koa mety hieritreritra hoe izany no fiheverany anao. Nahoana anefa ianao no mila mitandrina?
Inona no mety hitranga?
Nahoana no mila mitandrina ianao?
Tsy ratsy akory ny manana namana ankizilahy raha ankizivavy ianao. Ahoana anefa raha lasa mifandray be ianareo? Mety hieritreritra izy hoe tia azy ianao.
Mety hieritreritra an’izany izy, raha hoatr’ireto ny fihetsikao aminy:
Miresaka aminy foana ianao.
“Tsy ho afaka hifehy ny fihetseham-pon’ilay ankizy ianao. Tsy mety anefa raha miantso an’azy sy miresaka aminy foana ianao, nefa avy eo ianao miteny hoe mpinamana fotsiny ianareo.”—Seheno.
Vonona ny hanampy azy foana ianao.
“Tsy izaho no nandefa SMS voalohany fa ilay ankizivavy. Novaliako foana anefa ny SMS nalefany, dia sarotra be tamiko avy eo ny nanazava taminy hoe mpinamana fotsiny izahay.”—Richard.
Lasa manantena izy noho ny zavatra ataonao.
“Imbetsaka aho no mahita ankizy tia manadaladala fotsiny. Tsy mieritreritra ny hiaraka amin’ilay anankiray akory izy. Mandratra ny fihetseham-pon’ilay anankiray anefa izany.”—Tiana.
Tadidio àry hoe: Raha mifampiresaka amin’ny ankizy iray sy manao zavatra ho azy foana ianao, dia mety hieritreritra izy hoe tia azy ianao.
Mety handratra ny fihetseham-pony ianao.
Hoy ny Baiboly: “Marary ny fo raha mihemotra foana ny fahatanterahan’ny zavatra antenaina.” (Ohabolana 13:12) Inona no hantenainao raha hoatran’ny hoe tia anao ny ankizy iray?
“Mety hitranga ny hoe mbola tsy te hampiaraka amin’ny ankizy iray ianao, nefa hoatran’ny mampanantena an’azy koa. Tena handratra ny fihetseham-pony anefa ianao, raha izany no ataonao.”—Jessica.
Hoy ny Baiboly: “Aoka ny tsirairay aminareo hihevitra izay hahasoa ny hafa, fa tsy izay hahasoa ny tenany ihany.” (Filipianina 2:4) Ahoana no fahitanao ny ankizy tsy mihevitra afa-tsy izay hahasoa ny tenany? Hanao ahoana ny lazany?
“Tsy tiako ny ankizilahy manadaladala ankizivavy fotsiny. Mety ho hoatr’izany ihany mantsy izy na dia rehefa manambady aza. Tia tena ny ankizy hoatr’izany, satria te hiseho fotsiny izy hoe be mpitia.”—Julia.
Tadidio àry hoe: Handratra ny fihetseham-pon’ny hafa sady ho ratsy laza ny ankizy iray, raha manadaladala olona fotsiny.
Tokony hifampitondra amin’ny fo ‘madio tanteraka’ toy ny mpianadahy ny tanora lahy sy vavy, hoy ny Baiboly. (1 Timoty 5:1, 2) Tsy hahita olana ianao sy ilay namanao, raha arahinao io toro lalana io.
“Izaho aloha rehefa manambady, dia tsy hiadaladala amin’ny vadin’olona izany e! Dia aleoko amin’izao ’zaho mbola mpitovo izao dia efa mitandrina tsara rehefa minamana amin’ny ankizilahy.”—Léa.
Hoy ny Baiboly: “Ny teny maro tsy ilaozan’ota.” (Ohabolana 10:19) Azo ampiharina io toro lalana io rehefa miresaka sy rehefa mandefa SMS. Mila mitandrina ianao sao be loatra ny zavatra resahinao na ny SMS alefanao, ary sao dia matetika loatra.
“Tsy mety ny hoe mandefa SMS isan’andro amin’ny ankizivavy iray ianao, nefa ianareo tsy miaraka akory.”—Benja.
Hoy ny Baiboly: “Ny fahendrena avy any ambony kosa dia madio aloha.” (Jakoba 3:17) Mety ho fanaon’ny mpinamana fotsiny ny mifamihina, nefa mety hieritreritra ilay namanao hoe tia azy ianao matoa manao azy an’izany.
“Miresaka tsara amin’ankizilahy ’zaho, fa tsy mifandray be loatra aminy.”—Maria.
Tadidio àry hoe: Tandremo tsara ny fihetsika ataonao amin’ilay namanao. Hoy ny ankizivavy iray atao hoe Jennifer: “Mila miezaka be ianao vao mahazo namana tsara. Tandremo àry sao ny ataonao indray no mahatonga anareo tsy ho mpinamana intsony.”
Mba henoy ihany izay lazain’ny olona. Raha misy manontany anao hoe: “Miaraka angaha ianao sy Ianona?”, dia mieritrereta fa mety ho efa mifandray be loatra ianareo.
Ataovy mitovy daholo ny fomba itondranao ny ankizilahy namanao rehetra, raha ankizivavy ianao, fa aza misy atao miavaka kokoa.
Mitandrema rehefa mandefa SMS sao matetika loatra, na miresaka zavatra tsy tokony horesahina, na mandefa an’ilay izy amin’ny fotoana tsy mety. Hoy ny ankizivavy iray atao hoe Alyssa: “Hafahafa raha amin’ny misasakalina ianao no mandefa SMS amin’ny ankizilahy.”
Asio Fetrany Ihany
Tena Tia sa Taratara Fotsiny?
Fantaro ny atao hoe taratara fotsiny amin’ny olona iray sy ny hoe tena tia azy.
Ato misy soso-kevitra hanampy anao hahafantatra raha tena tia anao ny olona iray na te ho namanao fotsiny.
Hizara Hizara Mpinamana Fotsiny sa Mpifankatia? Fizarana 2: Tena Tia Azy Tokoa ve Aho?
ijwyp no. 56